Tsiaron'ny tolom-panafahana :: Halefa etsy Antsahavola ny horonantsary “Ilo tsy very” • AoRaha
Tsiaron’ny tolom-panafahana Halefa etsy Antsahavola ny horonantsary “Ilo tsy very”
Hotsaroana, toy ny isan-taona, ny tolona nataon’ireo Malagasy maherifo, tamin’ny 29 marsa 1947. Hisy ny fihaonana karakarain’ny Ivon-toeran’ny Kolontsaina Malagasy (IKM), etsy Antsahavola, hanamarihana an’io vanim-potoana nanan-danja teto amin’ny firenena io, amin’ny 27 marsa ho avy izao.
Misongadina indrindra ny fandefasana ny horonantsary “Ilo tsy very”, notontosain’ i Solo Randrasana, tamin’ny taona 1987. Tafiditra ao anatin’ ny fandaharam-potoana ny famelabelaran-kevitra hiarahana amin’ny profesora Rasoloarison Lalasoa Jeannot. “Ny tolom-panafahana tamin’ny 29 marsa 1947 sy ny fiheveran’ny Malagasy azy ankehitriny”, no lohahevitra hohazavaina ao. Tsy misy vidim-pidirana.
Mitoetra ho maodely ho an’ny mpanatontosa tanora rehetra ny “Ilo tsy very”, raha ny sarimihetsika malagasy no resahina. Io no horonantsary malagasy lava voalohany. Dimy amby fitopolo minitra ny faharetany. Mifangaro ao anatin’ny tantara ny teny malagasy sy frantsay. Teto Madagasikara no nanaovana ny fandraisana ny sary.
Miresaka ny tolom-panafahana tamin’ny taona 1947 ny ““Ilo tsy very”. Voa- resaka ao anatin’ny horonan- tsary ny fampijaliana sy famoretana an’ireo Malagasy nanohitra ny Frantsay. Nody ventiny ny rano nantsakaina ho an’i Solo Randrasana, izay nanatontosa azy satria firenena maro no voasarika tamin’ny sanganasany, ka lasa naha- fantarana ny fisian’i Madagasikara.
Fanokafana ny taona teatraly :: Holalaovina an-dampihazo ny tantara “Henjan-droa”